Cosicosi: Iphelile inganekwane nge-USA - Bayede News
Idlala ingqathu yayo yepolitiki yezomnotho i-USA eMiddle East
Kule minyaka ecela ema-200 bekunezinganekwane nge-United States of America (USA). Lezi zinganekwane zenze abaningi babuka leli lizwe njengenkosana yedemokhrasi. Abanye abaholi nabantu nje phaqa emazweni ehlukene bebezikala ngayo i-USA.
Bonke laba bebengazenzi kepha nayo i-USA ibisemkhankasweni kuyo yonke le minyaka yokutshala inganekwane kubantu bomhlaba. Inganekwane enkulu kunazo zonke ngaleli lizwe ingomlando wokubumbeka kwe-USA eminyakeni engama-250 eyedlule. Kulokhu amaMelikana athi ukubumbeka kwawo kwabe kuluphawu lwedemokhrasi nokuyinto engakaze yenziwe ngelinye izwe.
Ngenxa yalo mlando kumele bonke abantu bathathisele kuyo uma kukhulunywa ngenkululeko yomuntu, amalungelo kanye nedemokhrasi jikelele. Isimanga kulokhu wukuthi kasekho owakhumbuzayo ukuthi i-USA lena yakhiwe phezu kwezingazi zaboHlanga ababeyizigqila. Bona laba boHlanga abalithole zolo lokhu ilungelo lokuvota nokuzibiza ngama “Melikana aphelele”.
Eminyakeni emine eyedlule bebelokhu bekhunjuswa aboHlanga ukuthi bayimilanjwana njengoba uMengameli ophumayo uTrump ubede esho ukuthi abamhlophe e-USA kabaqaphele izwe (labo) lingemukwa yilabaya ekhomba aboHlanga.
Izidubedube zaleli sonto ezindlini zoMbuso e-USA lapho osidlame abebefuqwa zinkulumo zikaTrump zikhombe khona ukuthi labo abazibona njengamakhosana e-USA (abelungu) baluzwile uphondo obelushaywa yinduna yawo uTrump ukuthi kukhona okudla amantshontsho emsamo.
Ngokwaleza zinkumbi ebezembathe iWashington i-USA ngeyabamhlophe hhayi abanye. UTrump lona nguye ithemba labo lokuvikela lokho okuyingcosana osekusele ngezwe labo. Konke lokhu kuqede inganekwane ngaleli lizwe abanye abathi ngeloju nezinyosi.
Ngeke nje i-USA isatshela i-Uganda noma iZimbabwe ukuthi ukhetho lwayo aluphathwe kanjani. Ngeke isatshela iChina ukuthi imibhikisho yaseHong Kong ayeluswe kanjani. Sekuyihlaya ukuveza ezokuphepha zase-USA njengonkulunkulwana ngoba nakhu behlulwe ngosidlame.
Isithombe lapho osombusazwe base-USA beqhaqhazela ngoba bezwa izihlwele phandle senze kwabonakala ukuthi kanti leli zwe liyafana nje namanye.
Ubuqhwaga be-USA nobandlululo lwabantu abaningi bakhona alusadinge bacwaningi ngoba nakhu libonwe nayingane encane ingani osidlame laba baludavuze emini kubuka wonke umuntu. Ingani noTrump akathumelanga muntu kepha uziyele yena esixukwini wafike wasibonda wasishiya nephini yavutha inhlokodolobha.
Okunye okubahlule bancama wukuba ngosiyazi besayensi nezifo. Namuhla abantu base-USA basengozini yokuhlatshwa wukhuvethe ukwedlula abantu basemadolobheni ampofu ase-Afrika, e-India naseBrazil. Kulokhu izinyanga zomhlaba zehlulwa ukuzelapha.
Sekushiwo konke lokhu, likhona ikhono amaMelikana analo futhi kulo ahamba wodwa. Ukuzikhohlisa nokwenza sengathi konke kuhamba kahle. Ngesonto elizayo njengoba ephuma nje uTrump, enye inganekwane, uMengameli omusha uBiden uzophaka enye inganekwane ukuze umhlaba uyibuke ngamanye amehlo i-USA.
Kepha okwamanje eyeminyaka engama-250 inganekwane iphele ngosuku, lapho inyoka izidla yona ngoba isitha asivelanga ngaphandle kepha sigadle khona kwaso lapho umkhonto ugwaza ekhaya.